प्रोग्राम वा वेबसाईटहरूसँग पीडीएफ अनलाइन कसरी सम्मिलित हुन वा सामिल हुने क्रिएटिव अनलाइन
कसरी पीडीएफ अनलाइनमा सम्मिलित हुन वा सामिल हुने
के तपाईंलाई यो कहिले भएको छ कि, जब कुनै शीर्षकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंसँग धेरै पीडीएफ फाइलहरू थिए र तपाईंले एउटामा हेर्नुपर्‍यो, अर्को, पहिले फिर्ता जानुहोस् ...? यदि हो भने, निश्चित रूपमा तपाईले धेरै पटक सोच्नुभएको छ कि त्यहाँ त्यहाँ एक उपकरण होला कि पीडीएफमा समावेश हुन वा तपाईंको काम सजिलो बनाउनको लागि सामील हुन सक्छ, सही?
जब पिडिएफ केहि वर्ष पहिले आयो, यो सम्भव थिएन कि फेरि सबै काम फेरि गर्यो। यद्यपि, अब चीजहरू परिवर्तन भएका छन् र तपाईं सजिलैसँग उपकरणहरू मार्फत PDF मा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ?
1 सँगै पिडिएफ राख्दै, यो केको लागि हो?
1.2 एडोब मर्ज PDF
1.4 अनलाइन २ पीडीएफ
1.6 PDF24 टूलहरू
सँगै पिडिएफ राख्दै, यो केको लागि हो?
त्यहाँ तिनीहरू छन् जो सँगै पीडीएफ राख्ने पक्षमा छन् र जो यो विचार मनपर्दैनन्। र सत्य यो हो कि यो सबै निर्भर गर्दछ। यसका राम्रो बुँदाहरू छन् र के यति राम्रो छैन।
उदाहरण को लागी, पिडिएफ सामिल हुनु भनेको त्यो फाईलको साइज ठूलो हुन्छ र पाठको अतिरिक्त यसमा छविहरू, टेबल्स र अन्य तत्वहरू छन् जसले यसलाई भारी बनाउँदछ, यो यति ठूलो हुन्छ कि कम्प्युटरमा हेरफेर गर्दा। कहिलेकाँही ह्या hanging्गि without बिना यसको प्रक्रिया गर्न सक्षम नहुन सक्छ।
यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ कि पृष्ठहरूको संख्या धेरै वृद्धि हुँदैछ, जसले व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। यो हेर्नको लागि समान छैन कि तपाईंसँग १००० पृष्ठहरू भन्दा १०० पृष्ठहरूको कागजात छ, यसले तपाईंलाई अधिक उदासिन तुल्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंले सबै पृष्ठहरू अध्ययन गर्नु पर्छ भने।
जसले पीडीएफ सँगै राख्नको लागि हो उनीहरू माथिको वकालत गर्दैनन्, तर यो पनि तर्क गर्छन् कि यदि तिनीहरू बिभिन्न बिषय हुन् भने, प्रत्येकको लागि पीडीएफ हुनु उत्तम हुन्छ, एक पटक काम गरे पछि तपाईले यसलाई संग्रह गरी जारी राख्न सक्नुहुन्छ। निम्नसँग, सबै कागजातमा सबै छैन।
हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, यदि तपाईं पीडीएफमा सहभागी हुन चाहानुहुन्छ भने, यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जुन यसलाई प्राप्त गर्नका लागि।
पहिलो अनलाइन कार्यक्रमहरू मध्ये एउटा जुन हामीले तपाईंलाई भन्नु पर्ने हो एक उत्तम ज्ञात हो, केवल पिडिएफमा सम्मिलित हुनका लागि मात्र होइन, फाइलहरूलाई धेरै कागजातहरूमा रूपान्तरण गर्नका लागि पनि (पीडीएफलाई वर्ड, वर्ड टु जेपीजी ...)।
यसलाई प्रयोग गर्ने तरीका धेरै सरल छ। तपाईंले वेब पृष्ठमा जानुपर्नेछ जहाँ तपाईं पिडिएफ कागजातहरू छान्नुपर्नेछ जुन तपाईं सँगै राख्न चाहानुहुन्छ। यी केवल तपाइँको कम्प्युटरमा हुनु हुँदैन, यसले तपाइँलाई ड्राइभ, ड्रपबक्स, आदि बाट अपलोड गर्न विकल्प पनि दिन्छ।
एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई अपलोड गरिसक्नु भए पछि, तपाईंले मलाई केहि मिनेट प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ तिनीहरूलाई सँगै राख्न र तपाईंलाई पूर्ण कागजात डाउनलोड गर्नका लागि। अवश्य पनि, अधिक मूल कागजातहरू तौल गर्दछ, जब सँगै राखिन्छ, अधिक अन्तिम परिणाम तौल हुनेछ।
एडोब मर्ज PDF
यो विकल्प राम्रोसँग परिचित छैन, तर तपाईं यसलाई एकल फाईलमा अनेकौं पीडीएफहरू संयोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र कसरी पिडिएफ राख्ने? धेरै सरल, तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।
को पृष्ठमा जानुहोस् एडोब मर्ज PDF.
पृष्ठमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईं माथिको फाईलहरू छान्न सक्नुहुन्छ, वा फाईललाई फाँट र फाँट क्षेत्रमा फाँट्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर के छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र PDF मर्ज उपकरणमा थिच्नुहोस्।
फाईलहरू पुनः क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ, केहि धेरै अनलाइन उपकरणहरूले अनुमति दिदैन। एकचोटि तपाईंसँग यो भएपछि, तपाईंले भर्खर क्लिक गर्नुहोस् फाइलहरू मिलाउनुहोस्।
केहि मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस् र तपाईंसँग संयुक्त PDF हुनेछ।
पछि, यदि तपाईं पृष्ठहरू व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ भने, फाइल साझा गर्नुहोस्, आदि। त्यसोभए तपाईंले एडोबमा लगइन गर्नुपर्नेछ।
पीडीएफ अनलाइनमा सामेल हुनको लागि अर्को उपकरण हो, सानोपडीएफ। राम्रो कुरा के हो भने, यदि यो तपाईं प्राय: केही गर्नुहुन्छ भने, पृष्ठमा जानु हुँदैन बाट जोगिन तपाईंले सबै चीजको लागि Chrome मा एक्स्टेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ।
र तपाइँले यो कसरी गर्नुपर्दछ? पहिले तपाईले वेब पृष्ठमा जानुपर्नेछ, विशेष रूपमा सेक्सनमा पिडिएफमा सामेल हुन। त्यसो भए तपाईले फाईल अपलोड गर्नुपर्नेछ, या त तपाईको कम्प्युटर, ड्रपबक्स, गुगल ड्राईव वा क्लाउडमा कुनै अन्य भण्डारणबाट।
जब ती अपलोड गरियो, तपाईं आफूले चाहेको फाईलहरूलाई मिलाउन र तपाईंको पीडीएफहरू जोड्नुहोस् बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि मिनेटमा तपाईं संयुक्त फाइलहरू देख्नुहुनेछ, र तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न वा ईमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ, लि copy्क प्रतिलिपि गर्नुहोस् र यसलाई साझा गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई संकुचित गर्नुहोस्, आदि।
अनलाइन २ पीडीएफ
हामीले यस उपकरणको बारेमा तपाईसँग धेरै चोटि कुरा गरिसकेका छौं। यो एक वेबसाइट हो जहाँ तपाईं एक भन्दा बढी ढाँचामा फाइल रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। तर, थप रूपमा, यसले तपाईंलाई पीडीएफमा शामिल हुन अनुमति दिन्छ। अवश्य पनि, यहाँ तपाईसँग सीमितता छ र त्यो त्यो हो, व्यक्तिगत रूपमा, पीडीएफहरू १००MB भन्दा बढी हुन सक्दैन र सम्पूर्ण रूपमा, ती १ 100० MB भन्दा बढी हुँदैन। थप रूपमा, तपाईं केवल २० पीडीएफहरू सँगै राख्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई अधिक छोड्दैन।
यसको प्रयोगको मामलामा, यो मूल रूपमा अन्यसँग उस्तै हो, तपाईंले केवल फाइलहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ र यसलाई पर्खनुहोस् तपाईंलाई एक एक डाउनलोड गर्न दिनुहोस्। तपाईं अन्तिम कागजातलाई अन्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, यो शब्द, जेपीजी, आदि। अवश्य पनि, अवस्थित सीमितताको साथ, यो सम्भव छ कि छविहरू प्राप्त गर्दा त्यहाँ सीमितताहरू पनि छन्।
यो प्रयोग गर्नको लागि अर्को वेबसाइट हो यदि तपाईंसँग धेरै भारी PDF छैन भने। यो वेब अनुप्रयोग प्रयोग गर्न को लागी एक सजिलो छ, तर पीडीएफ संग २००MB भन्दा ठूलो छैन। यसको कार्य गर्ने तरीका सबै अघिल्लोसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यो हो, तपाईंले सामिल हुन चाहानुभएको फाईलहरू चयन गर्नुहोस् र केही सेकेन्डमा तपाईंले यसलाई डाउनलोड गर्न वा अरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, धेरै अन्य वेबसाइटहरू जस्तै, तपाईं पनि पीडीएफलाई अन्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, पृष्ठ आफैंमा नछोडिकनै।
यस अवस्थामा हामी यस पृष्ठलाई हाइलाइट गर्दछौं किनकि यसले तपाईंलाई पीडीएफमा सामेल हुन अनुमति दिँदैन, तर तपाईं उनीहरूसँग सामेल हुन पीडीएफ, वर्ड वा अन्य ढाँचाहरूमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ र एकै समयमा तिनीहरूलाई एकल पीडीएफमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
चरणहरू समान छन्। एकचोटि तपाईको वेबसाईटमा प्रवेश गरेपछि तपाईले कुन फाइलहरू सामिल हुन चाहानुहुन्छ चयन गर्नुपर्दछ र फाईलहरू जोड्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। केहि मिनेटमा तपाईंसँग पूर्ण अन्तिम फाइल हुनेछ र तपाईं यसलाई कुनै समस्या बिना डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ (वा यसलाई साझेदारी वा मेल मार्फत पठाउनुहोस्)।
तपाईमले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग पीडीएफमा सम्मिलित हुन विकल्पहरू छन् तर ध्यानमा राख्नुहोस्, जसै तपाईले लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यहाँ केही कमजोरीहरू पनि हुनेछन् जसले तपाईलाई युनियनमा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी पीडीएफ अनलाइनमा सम्मिलित हुन वा सामिल हुने
पोस्टरका लागि चिठी
शीर्ष १० बेसिक र उन्नत फोटोशप कोर्सहरू